Inethiwekhi global Ingabizwa kufanele ngokuthi entsha, eziyiqiniso ngaphezulu ulwazi isikhala, lapho ukuthola kudingekile awukwazi imali. Akungabazeki ukuthi emhlabeni wonke web inthanethi ikhokhwe ngokwanele, kodwa ngisho lapho lingaba usizo kakhulu ukuthenga ezihlukahlukene izinzuzo ngokuphelele izimo khulula. Ngifuna ukhulume isofthiwe khulula. Mahhala isofthiwe - isofthiwe umjovo ayinikeli we izindlela zokukhokha. Ingqikithi yalo umqondo kusobala ngakho wonke umuntu eqonda lisha, kodwa, ngeshwa, it isiqala awela Esimweni esinjalo, uma ulwazi abaludingayo ukuze ukhokhele encane ziqalise, futhi namanje kusho. Ngokwesibonelo, udinga flash oqalisekayo ukushayela Windows7, kodwa izimali yokuyikhokhela ungahlelile, ngakho qala ngifuna lapho ukulanda. Advantageously, ukuthola izinsiza ezinjalo kulula kakhulu: thayipha angukhiye ezifanele, futhi emva ngomzuzu, uthole uhlu inthanethi, isibonelo http://yoursoftportal.ru nabanye. Nokho, iningi injini yokusesha ongabonisa ayiswe nezisetshenziswa shareware okuqukethwe. Ngakho, kuphela ezinye software amafasitela kuyoba emahhala, ngenkathi the main okuyingxenye uzokhokhelwa ngokwemvelo.
Ukuhlola ukuthi kungenzeka khulula thwebula, kufanele kuphawulwe inkimbinkimbi indlela uqobo. inthanethi abaningi ekhethekile azihloselwe ngisho ubhalisele thwebula ukuthi nakanjani kubhekwa inzuzo enkulu kulabo usanda ukuhlola ukuthi kungenzeka i-Inthanethi. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe izigaba ezithile, futhi lula uhlelo search oyifunayo. Ngesimo izincomo ezilandelayo Wabasaqalayo, ngifuna ukweluleka ukukhetha imithombo, okuyinto incazelo amathuluzi ehlongozwayo umjovo. Ukugxila incazelo, ungakwazi masinyane ukunquma ngesidingo ukulanda ifayela ethize. Khetha kahle ifomethi software yokubhuloga noma inthanethi thematic, hhayi zomsebenzi sesifufula, ngoba Wabasaqalayo kungaba nzima ukuthola okuqukethwe okulungile ezinqolobaneni zezifufula eziningi ungayeki ukunakwa ezidingekayo ukubonakala kokuqukethwe. Ngaphezu kwalokho, lezi zinsiza ungathola neminye imininingwane ewusizo ezifana kanjani ukufaka umshayeli kukhompyutha yakho.
inthanethi athile kungase kutholakale on iqhinga - inguqulo demo ye software. Lapho ukukhethwa umthombo acabangele zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama okukhulunywe ngaye ekuqaleni, ithuba ngokushesha ukuthola indawo efanele nge ngempela khulula inyuka isofthiwe kakhulu. Ngokuqinisekile, usuke eside umbuzo sokucabangela bokuba khona imithombo enjalo. Ngokwesibonelo, kusiza ngani-ke ngemibandela khulula ninikeza tinhlobo letehlukene izinhlelo? Umbuzo ngempela kulindeleke. Okusho - khona. Ubizwa abambisane ne ukwabelana amasevisi noma iyiphi imali engenayo esikhathini sethu ethandwa kakhulu. Umsebenzisi elayisha amafayela, kuba mahhala, futhi umnikazi uthola ukudluliselwa ezithile share ku-akhawunti yakho. Ngakho, bonke ahlale ensimini omuhle - umsebenzisi akukuniki imali thwebula, umnikazi isisetshenziswa uthola isizumbulu semali, kodwa lincane kakhulu. Njengoba ubona, download khulula isikimu okuqukethwe kufanelana konke, ngoba lokhu, kungaba namanje isikhathi eside kakhulu.
Izinhlobo ezinkulu nabaqaphi. Izinhlobo ngabaqaphi yesimanje
Indlela xhuma i-laptop ne-TV yakho nge-HDMI ngokwakho?
Gaming motherboards: ukubuyekeza models engcono kanye nokubuyekeza
Indlela ukuxhuma ithebhulethi yakho kwikhompyutha yakho? A elula umbuzo - izixazululo ezilula
Indlela ukuxhuma ikhamera kukhompyutha
VGA-DVI adaptha ukuze qapha: incazelo, isiqu
"Moskvich-2150", the Suv kusukela esikhathini esidlule: Ukucaciswa, izithombe
Isifo se-Marfan sika: izimpawu eziyinhloko izimbangela
Indlela zihlume onsundu ekhaya?
Philips Xenium X1560: ezibekiweko lobuchwepheshe, imiyalelo, ukubuyekezwa
Kungani ukugqoka amaphijama izinsuku ezimbili zilandelana: 8 Izizathu Okuhle
Lithatha isikhwama sezibuko lens: izinhlobo, ukukhethwa, izincomo
Bench izandla zakho - yini lula?
Ubulungu SRO: zonke izinzuzo futhi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Kuyini Dry yokudonsa traction umgogodla, futhi lokho kusetshenziswa
Counterparty intela. Inkinga counterparties. I-Federal Tax Service: yokuqinisekisa counterparty
Sesikhala nephritis: izimpawu nokwelashwa izinso ukuvuvukala